ụzọ na-Spotify onyinye kaadị
Spotify kaadị onyinye dị ka ihe ọ bụla ọzọ kaadị onyinye n'ezie. Na, ha na-ugbu a na 3 na ụka (dị iche iche ụkpụrụ maka mba dị iche iche nke N'ezie) - $ 10, $ 30 na $ 60. Ị nwere ike gbapụta ndị a kaadị maka adịchaghị / na-akparaghị ókè Spotify na ndenye aha.
Ndị a bụ otu n'ime onyinye ndị kasị mma ị pụrụ inye ihe ọ bụla nke music hụrụ n'etiti gị na ezinụlọ gị na ndị enyi. Ha ga kpọrọ ha nke ukwuu ma ọ bụrụ na ha bụ ndị n'ime online gụgharia music ọrụ.
Mgbe ị zụrụ ndị a Spotify kaadị onyinye, ha na-abịa na a na koodu na gị mkpa iji tinye ma si otú gbapụta gị onyinye kaadị si uru na gị Spotify akaụntụ. The website njikọ ebe i nwere ike ime gbapụta onyinye kaadị / koodu bụ dị ka na-esonụ: http://www.spotify.com/redeem.
Part 1.Ways iji nweta Spotify onyinye kaadị
Part 2.How iji a Spotify onyinye kaadị
E nwere ụzọ ole na ole i nwere ike inwe onwe gị a Spotify onyinye kaadị. Anyị ga-ekwurịta ha ná mkpirikpi dị ka e n'okpuru.
1. Jụọ enyi gị maka onyinye
Ị nwere ike ịrịọ maka a Spotify onyinye kaadị gị hụrụ n'anya na ndị enyi n'oge ndị pụrụ iche. Ha bụ mfe dị online na onye chọrọ inwe ya n'ihi na ị dị ka onyinye ga-enwe nsogbu na-a Spotify onyinye kaadị online maka gị.
2. Ịzụta a Spotify onyinye kaadị online
Ị nwere ike ma na-aga https://www.spotify.com/us/gift-card/
ma ọ bụ ọtụtụ ikike online ere Spotify na ịzụta kaadị onyinye online. Nanị, abanye na gị Spotify akaụntụ, pịa ịzụta ihe e-kaadị nhọrọ, tinye onwe nkọwa dị ka achọrọ, họrọ ugwo nhọrọ na pịa Send ha nwere onyinye kaadị nyefere gị ma ọ bụ ndị enyi gị.
3. Buy Spotify kaadị onyinye si mma Jeriko
Ke United States, i nwere ike na-eje ije n'ime a Walmart, 7-iri na otu, Target na ọtụtụ ndị ọzọ dị otú ahụ superstores na ịzụta onwe gị a Spotify onyinye kaadị. Ọ bụ na mfe!
4. Get ya na online saịtị na-enye free Sportify kaadị onyinye / Koodu
E nwere nnọọ ole na ole saịtị-azọrọ na ha enye efep Spotify kaadị onyinye maka free. Ị ga-abụ ịkpachara anya mgbe aga na a nhọrọ dị ka ọ bụ ike iji gosi ma ha bụ ndị n'ezie ma ọ bụ, ka ha dị oké ọnụ ahịa na-enye a-agbalị. Ebe a na-atụ ole na ole na anyị hụrụ na Google: spotifycoupon.blogspot.com, onlinespotifycode.com na spotifyfreeaccount.com wdg
5. Zụrụ a Spotify onyinye kaadị si PayPal Digital Onyinye
Nke a bụ a pụrụ ịdabere na isi n'ihi ịzụ Spotify kaadị onyinye na nweghị ihe ize ndụ nke a ọjọọ malware ọrịa ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. Gaa https://www.paypal-gifts.com na nanị ịzụta onyinye kaadị na uru gị mkpa.
Ọ bụrụ na ị natara a Spotify onyinye kaadị, ma a na-ahụ ma ọ bụ mebere otu onye, ​​ọ pụtara mfe itinye ha na gị na Spotify akaụntụ. Ka anyị na-akọwa nke a maka gị.
Ọ bụrụ na ihe i nwetara bụ anụ ahụ nkịtị onyinye kaadị maka Spotify,
mgbe niile na ị chọrọ ime bụ nanị abanye na gị Spotify akaụntụ ma họrọ Ịkwụ Ụgwọ Nhọrọ. Nke a ga-enye gị nhọrọ nke na-agbakwunye ma a kaadị ma ọ bụ onyinye kaadị koodu n'ihi aga adịchaghị gị Spotify akaụntụ. Nanị tinye onyinye kaadị koodu (nyere na azụ nke kaadị) iji gbapụta uru nke onyinye kaadị na ọ ga-ahụ na-akpaghị aka etinyere na akaụntụ gị.
Ọ bụrụ na ihe i nwetara bụ ihe online / mebere onyinye kaadị maka Spotify,
mgbe ahụ, ị ​​nanị nwere soro ntuziaka nyere na email na ị ga-natara. Dịcha, ọ na e dere a njikọ na ị dị nnọọ ga-eso. Ọ ga-ajụ gị ka nbanye gị Spotify akaụntụ na na usoro ga-etinye gị mebere onyinye kaadị na-akpaghị aka na akaụntụ gị dị ka mma.
> Resource> Spotify> Ị Maara ndị a ụzọ na-Spotify Onyinye Kaadị